ကြည့်ရှုသူတိုင်းရဲ့ ရင်ခုုန်သံတွေကို ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားစေမယ့် မင်းသမီးချောလေး ခင်သဇင်ရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပုံရိပ်လေးများ – Shwe Ba
ကြည့်ရှုသူတိုင်းရဲ့ ရင်ခုုန်သံတွေကို ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားစေမယ့် မင်းသမီးချောလေး ခင်သဇင်ရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပုံရိပ်လေးများ
အခု မှာ လည်း ခင်သဇင် က သူမရဲ့ အလှအပတွေ ကို ပေါ်လွင်အောင် ရိုက် ထား တဲ့ ပုံလေး တွေကို ပြန် တင် ပေးထားတာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပရိသတ် တွေ အတွက် ခင်သဇင် ရဲ့ မိမိုက် လွန်းတဲ့ ပုံ တွေကို တင်ဆက် ပေး လိုက် ရပါတယ် နော် ။ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှတွေ နဲ့ ပရိသတ် တွေကြားမှာ ရေပန်းစား နေသူလေး ကတော့ မင်းသမီး ချောလေး ခင်သဇင် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ခင်သဇင် ဟာ သရုပ် ဆောင် အလုပ် ဘက်မှာ လည်း ထူးချွန်သူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမ က တော့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်းမှာ လည်း ကာရိုက်တာ ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင် နိုင်တဲ့သူ တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ခင်သဇင် ဟာ ဗီဒီယို ကားတွေ ခေတ်ကလည်း သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်း ဟာ အားပေးမှုကို အပြည့် ရထားတာ ဖြစ်ပါ တယ် … .
အမှာတော့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်းတွေ လျော့နည်း သွားပေမယ့် အနုပညာ အလုပ်တွေကို တော့မပြတ် လုပ်ကိုင် နေတာဖြစ် ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာ လည်း ကြော် ငြာလေး တွေ ရိုက် ကူး ဖြစ်နေ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ညှို့ယူဖမ်း စား နိုင်လွန်း တဲ့ မျက်ဝန်း တစ်စုံ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး အမိုက်စား ကောက်ကြောင်း တွေကြောင့် ပုရိသတွေ ကြွေနေ ရသူလေး က တော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ချောလေး ခင်သဇင် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမဟာ ကလေး ဘဝ ကတည်း က အနုပညာ အလုပ် တွေ ကို လုပ်ကိုင် ခဲ့သူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ခင်သဇင်ဟာ သရုပ်ဆောင် အလုပ် ကို သာမကဘဲ သီချင်းဆို လည်း ကောင်းသူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် … .
ခင်သဇင် ရဲ့ ဖက်ရှင် လေးတွေ ဟာလည်း အမြဲ လိုလို ကောက်ကြောင်း အလှတွေကို ပေါ်လွင် စေတာကြောင့် အားလုံး က လည်ပြန် မကြည့်ဘဲ မနေ နိုင်အောင် ကို မိုက်လွန်း နေတာလည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဆိုဆို ဟာ လတ်တ လောမှာ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေ မရှိသေး ဘဲ ခရီး ထွက်နေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ လှုပ်ရှားမှု လေး တွေကို လည်း လူမှုကွန် ယက် စာမျက်နှာ မှ တစ် ဆင့် ဝေမျှပေး နေ ရတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ အခုမှာ လည်း သူမရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှာပုံလေး တွေ တင်ထား တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် နော် … .
အခု မွာ လည္း ခင္သဇင္ က သူမရဲ့ အလွအပေတြကို ေပၚလြင္ေအာင္ ရိုက္ ထား တဲ့ ပုံေလး ေတြကို ျပန္ တင္ ေပးထားတာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ ခင္သဇင္ ရဲ့ မိမိုက္ လြန္းတဲ့ ပုံ ေတြကို တင္ဆက္ ေပး လိုက္ ရပါတယ္ ေနာ္ ။ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွေတြ နဲ႔ ပရိသတ္ ေတြၾကားမွာ ေရပန္းစား ေနသူေလး ကေတာ့ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ခင္သဇင္ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ခင္သဇင္ ဟာ သ႐ုပ္ ေဆာင္ အလုပ္ ဘက္မွာ လည္း ထူးခၽြန္သူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမ က ေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္းမွာ လည္း ကာရိုက္တာ ကို ပီျပင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ နိုင္တဲ့သူ တစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ခင္သဇင္ ဟာ ဗီဒီယို ကားေတြ ေခတ္ကလည္း သူ႔ရဲ့ ဇာတ္ကားတိုင္း ဟာ အားေပးမႈကို အျပည့္ ရထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
အမွာေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္းေတြ ေလ်ာ့နည္း သြားေပမယ့္ အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို ေတာ့မျပတ္ လုပ္ကိုင္ ေနတာျဖစ္ ပါတယ္ ။ လတ္တေလာမွာ လည္း ေၾကာ္ ျငာေလး ေတြ ရိုက္ ကူး ျဖစ္ေန တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ညႇို႔ယူဖမ္း စား နိုင္လြန္း တဲ့ မ်က္ဝန္း တစ္စုံ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး အမိုက္စား ေကာက္ေၾကာင္း ေတြေၾကာင့္ ပုရိသေတြ ေႂကြေန ရသူေလး က ေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ခင္သဇင္ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမဟာ ကေလး ဘဝ ကတည္း က အႏုပညာ အလုပ္ ေတြ ကို လုပ္ကိုင္ ခဲ့သူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ခင္သဇင္ဟာ သ႐ုပ္ေဆာင္ အလုပ္ ကို သာမကဘဲ သီခ်င္းဆို လည္း ေကာင္းသူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ … .
ခင္သဇင္ ရဲ့ ဖက္ရွင္ ေလးေတြ ဟာလည္း အျမဲ လိုလို ေကာက္ေၾကာင္း အလွေတြကို ေပၚလြင္ ေစတာေၾကာင့္ အားလုံး က လည္ျပန္ မၾကည့္ဘဲ မေန နိုင္ေအာင္ ကို မိုက္လြန္း ေနတာလည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဆိုဆို ဟာ လတ္တ ေလာမွာ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ေတြ မရွိေသး ဘဲ ခရီး ထြက္ေနတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ လႈပ္ရွားမႈ ေလး ေတြကို လည္း လူမႈကြန္ ယက္ စာမ်က္ႏွာ မွ တစ္ ဆင့္ ေဝမၽွေပး ေန ရတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ အခုမွာ လည္း သူမရဲ့ လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ မွာပုံေလး ေတြ တင္ထား တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ရေချိုးကန်ထဲက သူမရဲ့ရင်ခုန်ဖွယ် လျှို့ဝှက်အလှတရားတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ ရေချိုးရင်းရိုက်ထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုချပြလိုက်တဲ့ နန်းသီရိမောင်ရဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ပုံရိပ်များ
Next post အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးသားကို အပီအပြင်ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ နွယ်ဒါလီထွန်းရဲ့ အရမ်းလန်းတဲ့ ဗီဒီယို လေး